Homeसमाचारगायक सुवास पुरीको नयाँ गीत ‘तिम्रो बोली’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस)
November 30, 2020 admin समाचार 10137
गायक सु’वास पुरीको नयाँ गीत ‘तिम्रो बोली’को म्युजिक भि’डियो सार्वज’निक भएको छ । दीपक शर्माको शब्द तथा सं’गीत रहेको गीतले प्रेम’भाव व्यक्त गरेको छ । गीतको भिडियो समे’त बनेको छ । जसमा संगीतकार शर्मा र मोडल उषा उप्रेतीको अभि’नय देख्न सकिन्छ ।
भिडियोमा बैं’शालु उमेरमा युवायु’वतीको प्रेमकथा देखाउन खो’जिएको छ । युवराज वाइवाको नि’र्देशन रहेको भिडि’योमा निशल पौडेलको छायाँ’कन रहेको छ ।-रातोपाटी बाट
March 30, 2021 admin समाचार 5040
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माध’व नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल’लाई निलम्बनको कारबाही गरेपछि एमाले नेर्त रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिवाद गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत भट्टराईले अध्यक्ष केपी ओलीले नेता नेपाल र रावललाई
सक्किगोनीमा किन देखिन छाडे अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ ? यस्तो रहेछ कारण
August 29, 2021 admin समाचार 3744
तै तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फु’टेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो। पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’ लोकप्रिय हास्यटेलिश्रृंखला सक्किगोनिका कलाकारहरूले
February 24, 2021 admin समाचार 5733